Manontany tena aho raha fantatry ny olona maro hoe tromboma ny embolus? Embolus dia mety ho vatomamy misy tavy, sy biriky, ary na dia parasite aza, fa miankina amin'ny niandohan'ny fitsipika "asa" ao amin'ny vatana dia tsy miova. Ny fepetra toy izao - ny embolism ny foza - hanandrana hanazava.
Inona no atao hoe embolism?
Amin'ny ankapobeny, dia fanakanana trômpôs (ny tena fiaviana tanteraka) amin'ny areti-maso respiratory. Tsy mila dokotera ianao hahatakatra ny mety hampidi-doza toy izany. Amin'ny fanafody dia heverina fa ny fahasarotana lehibe sy mampidi-doza indrindra dia mety hipoitra avy amin'ny alàlan'ny taovam-pisefoana.
Tena mampidi-doza io aretina io, satria mety hiteraka fahafatesana tampoka izany. Mba hisasohana indray mandeha dia tsy ilaina izany, fa koa mba hisintonana ny firesahana amin'ny manam-pahaizana koa dia tsy voatery. Tsara ny miantso ny fiara tsy mataho-dalana raha vantany vao miseho ny soritr'aretina voalohany.
Mety ho samy hafa tanteraka ny famaranana ny embolism ho an'ny mararin'ny marary. Ny fiankinan'ny aretina dia miankina amin'ny antony maro. Ny anjara asan'ny manan-danja dia ny haben'ny embolus sy ny toerana misy azy. Mazava ho azy, ny lozam-pifamoivoizana kokoa, ny mampidi-doza kokoa amin'ny fiainana. Na izany aza dia tsy ny didim-pitsarana izany, satria amin'ny fahitana an-tserasera sy ny fiandohan'ny fitsaboana ny embolism dia azo atao ny miatrika ilay olana.
Symptoms of embolism pulmonary
Ary mba hahitana ny aretina amin'ny fotoana, dia mila mahafantatra ny fomba lehibe indrindra amin'ny fisehoany sy ny soritr'aretina ianao. Ny trombi kely dia tsy miteraka fahasimbana eo amin'ny mahasalama, fa raha izany dia mety ho fofona kely tampoka ny olona iray. Azo antoka fa mety hisy antony hafa ny fahatsapana ny tsy fisian'ny rivotra, noho izany dia azo atao ny mamantatra hoe embolismi izany na aretina hafa, ny fanadihadiana dia hanampy.
Ny soritr'aretina manan-danja amin'ny embolism dia toy izao manaraka izao:
Ireo famantarana voalohany amin'ny tena olana dia mety ho fahaleovan-tena, reraka, rendrarendra.
Ny embolism ny foza dia afaka manelingelina ny fo rhythm. Ary raha misy fanakanana ny sambo lehibe, dia azo atao ny hoditra manga.
Ny hotezy miaraka amin'ny ra dia mety ho porofon'ny embolisma ho an'ny foza koa (misy soritr'aretina hita amin'ny lhl.).
Mety hitranga ny fanoherana ny embolismo ao amin'ny areti-maso raha miteraka fanaintainana eo amin'ny tratra, ny fiakaran'ny hafanana, ny fihenan'ny tendrony ambany (ny tongotra sy ny tongotra amin'ny ankapobeny).
Rehefa miseho ireo marika momba ny embolism ny foza dia aleo any amin'ny hopitaly avy hatrany.
Ny antony mahatonga ny trombi sy ny fisorohana ny embolism
Ny clots - ny antony fototra amin'ny fivoaran'ny toe-javatra mampidi-doza - dia mety hiseho noho ny ratra na amin'ny trombophlebitis. Ny embolism pulmonary dia mety amin'ny:
olona mitarika lamosina sedra;
ireo izay mijaly amin'ny diabeta;
ny marary manana fiantohana mahery;
mijaly noho ny aretim-po,
ireo izay manana ny aretin'i Crohn.
Mba tsy hiditra ao amin'ny hopitaly miaraka amin'ny embolism ny pulmonary ary tsy mahazo medikaly maharitra fitsaboana, azonao atao ny mandray fepetra fisorohana:
Voalohany, mila mitondra aina tsara ianao. Mampitandrina ity embolism ity, ary marary maro hafa no hanampy amin'ny fisorohana. Ny sakafo mahasalama, ny fifehezana lanja, ny fitsaboana amin'ny fotoana fohy - ny soa rehetra ihany no hahazo tombony.
Tsy afaka mipetraka ela loatra ianao. Farafaharatsiny indray mandeha isaky ny ora dia tsy maintsy mitsangatsangana hanongotra ny tongotrao.
Mila misotro rano ampy ianao, indrindra rehefa mandeha. Fa ny kafe sy ny toaka dia zavatra mety ho tsara ny mandà.
Ireo olona manana tendrontany amin'ny trombôs dia tokony handray matetika ny fitsaboana.
Ny embolism ny foza dia olana mampidi-doza, izay tsy misy afa-miala amin'ny fahitana azy amin'ny fotoana mety.
Fanarenana taorian'ny fandrobana
Famonoana afo sy fanesorana - antony, fitsaboana
Ny Syndromin'i Sjogren - ny endri-panandramana mahomby
Seranana postoperative - fanasitranana
Pasta miaraka amin'ny courgettes
Ahoana ny fomba hanamboarana hazo krismasy?
Ahoana ny hanasana ny loko amin'ny volony?
Mpandresy ho an'ny motoblock
Rabbitomania: Margot Robbie teo am-piandohan'ny horonan-tsary "The Adventures of Peter Rabbit"
Ala mikitroka ho an'ny alika
Tavoahangy "onenana" eo amin'ny takelaky ny lakozia
Akanjo sandany misy kofehy
Tazomoka taorian'ny fahaterahana
Vehivavy kiraro akanjo
Make up for brunettes with eyes brown
Fety amin'ny volana Aogositra
Leo sy Libra - fifanarahana amin'ny fifandraisana amin'ny fitiavana, fanambadiana ary fisakaizana